Maxaad ka Taqaanaa Barashada Falsafadda (Philosophy)?? - Daryeel Magazine
Maxaad ka Taqaanaa Barashada Falsafadda (Philosophy)??
Falsafaddu Waa is waydiin caqliyaysan oo qoto dheer taasoo ku saabsan mabaadii’da aasaasiga ah. Falsafadu waxaa loo qaybiyaa Afar qaybood: Metaphysics, oo ah baaris ku saabsan runta iyo xaqiiqda dhabta; epistemology, barashada asalka, jiritaankooda iyo xadka aqooneed; Ethics, oo ah barashada sifaadka akhlaaqda iyo garsoorka; iyo aesthetics, oo ah barashada sifaadka quruxda farshanka.
Sida la aaminsanyahay, waxaa maadadaan soo dhiraandhiriyay Giriigii hore, macnaha Philosophy-na waxaa ay ku macneeyeen raadinta aqoonta. Philosophy-gu waxaa uu ka koobanyahay guud ahaan qaybaha aqoonta sida Sayniska, Arts-ka iyo diinta. Farsamooyin iyo habraacyo ku saabsan mowduucyadaasi ayaa in badan la dhiraandhiriyay, mowduuc kastaana waxaa laga yeeshay dood maskaxeed kuwaasoo qaarkood ilaa iyo haatan ay socdaan.
Falsafaddu meel waliba ayay ku jirtaa, wax kaste oo su’aasha “sabab” jawaab u ahna waxaa ay noqonaysaa mid falasafadaysan. Falsafadda ayaa waxaa ay ka abuurantahay su’aalaha ay caruurtu waydiiyaan waalidiintooda, tusaale, canugu waxaa hooyadiis waydiin karaa “ layrka side ayuu ku ifay, canjeerada sided u samaysay, maxaan iskuulka u aadaa IWM. Waydiimahaasi dartood ayay maadadani ku hormartay, waxaana xusid mudan in su’aalaha ay meel walibaa galeen.
Maxaad ka Taqaanaa Madhalaysnimada (Infertility) Maxaad ka taqaanaa maadada Magnesium?? Barashada Aqoonta Iyo Xikmada Philosophy laguu fududeeyay